RINDRIM-BAVAKA (4 - 5 - 6 - 7 )
Misaotra Anao izahay TOMPO tsara indrindra fa mbola manana fotoana ahafahanay mifampiresaka Aminao amin ny alalan ity rindrimbavaka ity.
Mangataka famelan keloka Aminao aho JESO kRISTY nohon ny fahotana vitako isan andro, ary tena hitalahoko Aminao izany.
Mifona indrindra amin ny ratsy izay natao ary mangataka ny fahasoavanao hitoetra aty anatiko amin izay rehetra ataoko.
Hitanao ny adin tsaiko TOMPO izay mitambesatra ary matoky ny fitiavanao aho.
Amin ny Anaranao mahery no anaovako izany vavaka izany.
(nosoratan'i Mme Soa tamin'i 7 jona 2013)
Tompo malala ô! misaotra Anao aho fa mbola afaka manao oram-po eto ndray.
Tiako loatra ny miresaka Aminao ka tena fifaliana ho ahy ny miditra eto mba hiombombavaka amin'ireo namana mitovy finoana sy fitiavana Anao, ary indrindra matoky Anao.
Koa mamerina mametraka ny fiainako sy ny hoavin'ny ankohonako eo ampelatanana aho ry Andriamanitra Tsitoha ô.
Mangataka iany koa ny Fanahy Masinao hanazava ny lalako sy ny lalan'ny ankohonako ety an-tany fandalovana ity.
Misaotra Jeso fa @ anaranao no anaovanay zao vavaka zao.
(nosoratan'i christiane tamin'i 3 jona 2013)
fahefana fahefana :
Misaotra mandrakariva Anao izahay TOMPO amin ny fitiavanao fa nomenao hery izahay ka afaka miresaka Aminao amin ny alalan ity Rindrim bavaka ity.
Ianao no mahalala ny momba anay tsirairay avy amin izay fantatrao fa mahasoa sy mahatsara anay.
JESOSY O, aoka ny Fahefanao hanjaka eto an tany ka hirotsaka aminay tsirairay avy.
Mamela ny helokay TOMPO O satria manao ny tsy mety eo imasonao mandrakariva izahay.
Ampitomboy aminay ny fahasoavanao JESOSY ary aoka ny fahasoavanao hirotsaka aty anatinay.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 19 jona 2013)
Misaotra Anao aho Jesosy Tompoko sy Mpamonjiko fa vita soa amantsara ny fanadinana ;
Dia apetrako eo ampelatananao ny valin'izany fanadinanan izany.
Mametraka eo ambanin'ny hazofijalianao koa mba ho feno ny fitahianao ny fandidiana izay hatao amiko.
Matoky aho Tompo fa ianao no hitahy sy hanasitrana
@ Anaranao lehibe no ametrako izany vavaka izany
(nosoratan'i RNH tamin'i 15 jona 2013)
Misaotra fa fitiavanao,famindramponao,fahasoavanao no mbola mahatoy izao anay : izaho,ny vadiko,ny zanako,ny tokatranoko,reo iraytampo amiko,ny havako,ny mpiara-miasa amiko,zay rehetra mahakasika ahy.
Mila ny fahafenoinao isan'andro aho,ary indrindra koa ny fanatreanao.
Tompo a!tazomy aho tsy hiala aminao fa ahay ifikitra Aminao n'aiza n'aiza ary na inona na inona manjo.
Rakofy @ ranao zahay mba tsy ho azon'ny loza ary tsy ho resiny fakampanahy.
Arovy iany koa Tompo ô!tsy ho afabaraka, fa ahay mampiseho ny voninahitrao eo @ ny fiainanay.
Misaotra Tompo ô fa mbola afaka atao @ Anaran'JESO KRISTY zao vavaka izai.
(nosoratan'i christiane tamin'i 12 Jona 2013)
fitarainana fitarainana :
Tompoko Andriamanitro ô!mivavaka Aminao aho ary ampitaiko eto ho fiombonana @reo namana.
Malahelo ary mitaraina fa mafy ny maazo ahy @ ataon'i El mpiara miasa amiko fa ataony mintsy zay aalavo ahy @asa ary afeniny avoko ny asa retra.
Avonavona sy fakizitinana no valiny ra mba manontany.ndraindrai aza dia miditra @ mailko izy dia supprimerny ze message ao fa miditra aloha b izy satria tsy afaka ny afeniko azy ny code.
Tompo a!mitairaiko fa betsaka ireo alatra ataony amiko kanefa koa za dia matahotra azy.
Hianao Tompo no anaterako zao fitarainana izao ary mifona aminao aho ra lasa maloto fo noho izany. mifona ary tena mifona @toe-poko fa iezaka aho Tompo iala @ zay retra tsy mifanaraka @ sitraponao.
Misaotra mihaino vavaka Ray ô .@ ANARAN'I JESO KRISTY ZOKY SY MPAMONJIKO NO ANAOVKA ZAO VAVAKA IZAO.
(nosoratan'i vehivavy mpiasa birao tamin'i 10 Mey 2013)
Ry Andriamanitra Tsitoha Ô!! miantso Anao @ Anaran'i Jeso Kristy Zoky sy Mpamonjy anay aho.
Misaotra Jeso fa Hianao no efa nisolo voina anay,misaotra fa Hianao no efa misolo vava anay eo anatrehan'Ilay Ray Tsitoha Tompo'ny hery sy ny fahefana reetra.
MINO IZANY AHO ARY MANAIKY NDRINDRA KOA NY FAHEFANY ARY ATOLOTRO ANAO RAY NY HOAVIN'NY HERITIANA EO @ ASANY MBA HOVOATAZONA IZY.
Tsy ny fahafataranay olona na ny fanananay havana no ahazoanay valimbavaka fa ny finoanay sy ny fametrahanay ny zavatra reetra eo ampelatananao ry Jeso ny fiainanay @ antsipirihana.
Matoky Anao aho ary mankasitraka mandrakariva ny fitondranao nyfiainanay.
MISAOTRA TOMPO Ô, MISAOTRA JESO Ô, MISAOTRA FANAHY MASINA Ô fa Hianao no nitaridalana ahy hivavaka sy hiankohoka AMINAO TELO ZAY IRAY.AMEN AMEN AMEN
(nosoratan'i Maman tamin'i 28 Mey 2013)
Fanahy Masina Fanahy Masina :
Ilay FANAHY MASINAO TOMPO no ilainay hirotsaka aty amin ny fonay mandrakariva tahaka ireo Mpianatra Apostoly nomenao fahefan.
(nosoratan'i Harisoa tamin'i 18 Mey 2013)
Misaotra mandrakariva Anao izahay Tompo raha mbola omenao famindram po amin izao ora sy fotoana izao.
Misaotra izahay satria hainao ny zavatra rehetra izay mbola ahafahanay miresaka Aminao amin izao ora izao.
Mamela ny helokay Tompo satria tsy fantatray ny ataonay ka manjary manaonao foana izahay indraindray.
Mangataka ny fitondranao ny fiainanay amin izay rehetra ataonay ka dia miantoraka eto anatrehanao izahay.
Apetraka am pelantananao ny hoavinay rehetra Tompo o.
Dia amin ny Anaranao no hanaovanay izany vavaka izany. Amena
(nosoratan'i Sylvie tamin'i 16 Mey 2013)
Andriamanitra rainay ô ! Rainay Ianao @ alalan'i Jesoa Kristy zanakao.
Misaotra Anao indrindra noho ny haleben'ny fitiavanao, satria isanandro dia havaozinao aminay ny famindramponao sy ny fahasoavanao.
Ianao no mihazona ny aminay retra ka izany no mbola maha toizao anay.
Misaotra ndrindra Tompo, eny misaotra @ zavatra reetra.
Mifona Aminao nefa zay satria fantatrao fa tsy tanteraka, mandika mandrakariva ny didinao masina, mamelÃ ny helokay Tompo ô ! ary havaozy ny fo amampanahinay mba ho mendrika Anao.
Misaotra Tompo satria fantatray fa mihaino ary mamaly vavaka Ianao.
Omeo anay mandrakariva ary Tompo ny Fanahimasinao mba ho mpitari-dalana anay.
Omeo fo matoky koa izahay fa Ianao no Ilay tsy miova omaly, anio ary ho mandrakizay, manana ny fahefana reetra eo @ fiainanay.
Misaotra Ray ô ! @ anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy Mpamonjy anay.
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 17 Mey 2013)
Pardonnes-moi Mon seul Dieu, Mon seul Seigneur Jésus-Christ, Mon Sauveur pour tous ceux qui sont contre ta volonté en parole, en acte et en pensée.
Gloire à toi Dieu Père Fils et Saint-Esprit,
(nosoratan'i Bibiche tamin'i 27 Aprily 2013)
Tompoko sy Andriamanitro ô, mitalaho aminao aho, enga anie ka mba ho voaantso amin'ny asa izay nanaovako fitsapana ny alarobia 17 aprily lasa teo aho.
Misaotra anao sahady aho. Amin'ny anaran'i Jeso Ilay Mpamonjiko.
(nosoratan'Ity mpanompon'Andriamanitra tamin'i 28 Aprily 2013)
Ry Rainay izay any an-danitra ô! atolotro Anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra fa mendrika Anao izany.
Asandratro ny tanako ho Anao Jeso Mpanjakako, hianao ilay Mpanjaka ny foko.
Tsy manana tompo hafa tsy Hianao aho, Hianao no irin'ny foko, tsy misy fetra tokoa. Anteriko ho Anao Tompo ô ny saotrako.
Raiso Tompo Masina indrindra ô zany vetsovetso-poko izany fa mangetaheta ny fanatrehanao aho sy ny fahafenoiny Fanahinao.
@ Anaran'i JESO KRISTY
(nosoratan'i R.C.H. tamin'i 24 Aprily 2013)
Tompo ô! misaotra Anao aho fa mbola nomenao tombonandro ary afaka ndray miditra eto. mifona @toepo tsy mendrika fa dia zay mintsy no iantorahako Aminao fa tsy tiko loatra mintsy ny ataony Elysée amiko,tsy tantiko ny avonavony sy ny fanitsakitsahana ataony,ny lainga ,ny fitaka,ny tsy firahirahina,ny fangalarambola ataony amiko.
TOMPO a!mifona hoazy aho,mifona ho ahy koa.fa Tompo sy Mpamonjy mihaino fitarainana Hianao dia zay no itodiako Aminao.tena mahasosotra mafy ahy mintsy ny ataony.
Hianao no mahalala ny amiko sy ny aminy fa ampio aho Tompo fa ny tomboko dia izaho manana Anao.
Mamalio vavaka Tompo ô!Misaotra Anao @ ANARANY JESO KRISTY.
(nosoratan'i R.H.C tamin'i 06 Mey 2013)
Mitalaho RayMitalaho Ray :
Andriamanitra ô, tena mba mitalaho re mamela ny helokay indrindra izahay mivady izay be fahotana ary miangavy indrindra ny mba hamindranao fo aminay de mba hanomezanao anay taranaka tsy hitanay intsony izay haleha ianao sisa fanantenanay mino sy matoky izahay fa hainao ny zavatra rehetra ary manantena fa mbola ao ianao miaradia aminay
(nosoratan'i tiffih tamin'i 03 Mey 2013)
JESSOY O, miantso Anao aho mba hihaino ny fivavako.
Mamela ny heloko Tompo o, ary dia mifona Aminao amin izay rehetra tsy mifanaraka amin ny sitraponao.
Tsapanay fa miantso anay koa Ianao JESO mba hiverina Aminao ny ondrinao izay nania, mangataka ny fitiavanao lehibe mba hameno ny fiainanay amin ny andronay rehetra.
Aza avela irery izahay Jeso amin ny ady izay atrehina isan andro fa mangataka ny fitiavanao Tsitoha mba ho eo aminay mandrakariva.
Mitoera TOMPO aty anatinay mba hialoha lalana anay Ianao amin ny lalanay rehetra.
Amin ny anaranao no hanaovako izany vavaka izany. Misaotra indrindra JESOSY O
(nosoratan'i Harisoa tamin'i 18 Aprily 2013)
fanoloron-jaza fanoloron-jaza :
Hanao fanoloron-jaza izahay ny 28 avril zao, mangataka ny fanahin'ny Tompo ho @azy telodahy zay atolotra ho an'i Jesosy, ny famille mba hokasihan'ny Tompo ny fony ka hanaiky an'i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy azyireo manokana,
Ny vola izay hikarakarana ny fiaraha-misakafo avy eo, mba hiverina @ fitiavana voalohany an'i Jesosy Kristy ny vadiko.
Fiadanan'i Jesosy ho aminareo.
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 16 Aprily 2013)
Tompo malala Ö! misaotra sy midera ny Anaranao aho fa mbola afaka mitondra ambavaka ny asanay sy tatie eto @ty rindrimbavaka ity.
Mino aho mantsy fa ra misy 2na3 hoy Hianao miombom-bavaka ka mangataka Aminao d hamaly HIANAO satria Andriamanitra tompon'ny teny farany Hianao.
Tompo ô!misy asa mety atao valeur 20Millions ra sitrakao aleo mba azonay "AvAnA cs".
Misaotra Tompo aminy izay valimbavaka omenao.
@ ANARANY JESO KRISTY TOMPO NO ANAOVAKO IZANY VAVAKA IZANY.AMEN .
(nosoratan'i Christiane tamin'i 16 Aprily 2013)
Tompo malala o!
Mifona Aminao aho fa manana toetra tsy mendrika.mifona fa madaindainga aho nefa tena tsy tiako koa zany.
Nefa koa za tia Anao d tokony manao ny sitraponao.ary te hametraka antombavaka Aminao koa za na d tsy mendrika aza, satria mino aho fa tsy misy hafa tsy Hianao irery no azoko antoka fa mamindra fo sy mamaly vavaka mahafapo.
Ka raiso re ry Tompo araka ny haben'ny fitiavanao tsy manapataperana: apetrako Aminao ary ny fiainan'ny A.sy M.maniry ny hanan-janaka mba ho zaza avy AMINAO tokoa dia zaza salama arabatana,saina fa indrindra ARA-PANAHY masina.
Tompo a! zazalahy ra sitrakao ka hatrany ambohoka dia efa miaramilan'i Kristy.
@ Anaran'iJESO KRISTY no anaovakao zany vavaka izany.
(nosoratan'i Maman tamin'i 24 Aprily 2013)
Misaotra ndrindra Tompo Ray Tsitoha Andriananahary! fisaorana eram-po erantsaina ary @Anaran'i Jeso Kristy Mpamonjy no anoloraka zao fisaorana izao.
Misaotra fa naazo valimbavaka zahay t@asa misaotra fa tena fahasoavana sy famindram-po no nanaraka anay avy Aminao ry RAY.
Tompo a!ampianaro ahy ny sitraponao omeo ahy Fanahy Masina itaridalana anay.
Misaotra Jeso a!
(nosoratan'i Christiane tamin'i 24 Aprily 2013)
Ry Andriamanitra Raiko ô! mifona Aminao aho noho ny fahotana vitako teo anatrehanao, na t@ fiteny na t@ fisainana, eny izay tsy tsaroako aza nef tsy mahamendrika eo anatrehanao.
Mamelà ny heloko Tompo ô! mamindrà fo amiko, fa hoaiza moa aho Tompo o! tsy mis fanantenana ho ahy raha tsy ao Aminao ihany.
Diovy @ rà nao soa aho de hadio, ary aoka ny Fanahinao Masina hanaisotra izay tsy nambolen'ny tananao ato amiko.
Matoky aho Tompo fa mihaino vavaka Ianao, "Izay manatona Ahy hoy Ianao dia tsy holaviko mihitsy"
Koa @ finoana no handraisako ny famindramponao.
Misaotra Ray ô! amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo .
(nosoratan'i NORO tamin'i 04 Aprily 2013)
Misaotra indrindra Anao ry JESO TOMPO tsara indrindra satria omenao tombon andro izahay mba ahay hifona Aminao, ahatsapa ny fahadisoanay mandrakariva amin izay atao.
Mihasarotra ny fiainanay ankehitriny nefa Ianao Andriamanitra o tsy manadino ny olona rehefa tena mibebaka.
Misaotra tamin ny fitiavana rehetra mbola omenao ary ny mbola homenao anay.
Dia amin ny anaranao no anaovako izany vavaka izany.
(nosoratan'i Sylvie tamin'i 11 Aprily 2013)
Misaotra Tompo fa mbola nomenao tombon'andro zahay ary mbol afaka mandefa fangatahambavaka eto.
Tompo ô! mangataka Aminao aho mba ho voaray ho mpiasa-mpanjakana io H. fa zay no mba faniriana.
Hianao Tompo mahalala lavitra ny hoaviny,ka izano no ametrahanay aminao izany faniriany izany.
Matoky sy mino aho fa ahazo valimbavaka avy aminao izy.
@ ANARAN'I JESO KRISTY no anaovako izany vavaka izany.
(nosoratan'i Christiane tamin'i 28 Marsa 2013)
Jesosy ô! Misaotra Anao aho nahatratra ny andro Paska sady afaka niray latabatra Taminao,
Mangataka Aminao aho Jesosy mbola hotahiana hatrany salama ka hahatratra ilay fotoana nagatahinay Taminao ny amin'ny tokantranonay
Omeo fahendrena avy Aminao aho ry Tompo Malala
Dia tahio koa ny vadiko arovy amin'ny fakampanahy omeo fahendrena avy aminao
(nosoratan'i Samuelson tamin'i 02 Aprily 2013)
TOMPO O , misaotra Anao izahay satria tram- pamonjena ka nahazo izao andro Paska 2013.
JESO TOMPO TSARA INDRINDRA O, lehibe ny indrafonao aminay.
Enga anie ka samy hahazo andro Paska hombanao famindram po ny tsirairay.
(nosoratan'i Mme Sisi tamin'i 30 Marsa 2013)
Andriamanitra o, misaotra sy midera Anao izaho nohon' ny fahasoavana lehibe nomenao ny tokantranonay, izay efa naika ikorontana, antso lehibe no nomenao ahy sy ny vadiko mba anaraka sy ianatra iaina arakan 'ny sitraponao,
Ankininay aminao tanteraka izany Andriamanitra o,
(nosoratan'i Joelle tamin'i 11 Aprily 2013)
JESOSY ô JESOSY ô :
Jesosy ô hitanao ny adintsaiko, reraka ny aiko, hainao atao ny zavadrehetra mahay mampisy ny tsy misy ary manafoana ny misy
Jesosy ô Ianao no herinay sy tokinay amin'ny fiainanay rehetra
Aza mahafoy ny zanakao sy ny asan'ny tananao
Misaotra Jesosy ô Amen!
(nosoratan'i Samuelson tamin'i 21 Marsa 2013)
Jesosy VelonaJesosy Velona :
Andriamanitra, miisaotra anao amin'i anarany Jesosy tompotsika zanakao velona mamojy anay ondry very.
Lehibe tokoa ny fitiavamao anay Tompo ô, eo ampelantananao Tompo .ny fahinay.ondrinao.
Ovay ary misia fahadiovana ny fonay zanakolombelona.erantany.mba tsy manjaka ny fitiavatena.
Vangio ny fo nay tsirairay zanakolombelona tsimisy ankanavaka.hiverindalana.hanaraka ny lalànao Jesosy malala
@ anaranao Jesosy no iakinanay amen
(nosoratan'i Naina Jenny tamin'i 24 Marsa 2013)
Midera sy mankalaza ny Anaranao mandrakariva aho Andriamanitra ô!
Mifona Aminao aho raha betsaka ny fahotana nataoko teo anatrehanao.
Misaotra anao noho ny fitiavanao, misaotra anao ny @ zavatra rehetra nataonao tamiko sy ny vady aman-janako.
Mangataka Aminao aho ny hitahianao ny dian'ny zanako lahy rahampitso, arovy hatrany izy Ray ô!
Mangataka Aminao aho mba hety tsara ny contrà le ataon'ny zanako vavy rahampitso.
Mangataka Aminao aho mba ho raikitra ny asa homenao ny vadiko.
Ampio aho ho afaka sigara Ray ô!!!
Henoy ny fifonako sy ny vavako Ray Masina tsara indrindra ô!!!
Amin'ny anaran'ny Jesosy.
(nosoratan'i Maman tamin'i 27 Marsa 2013)
Misaotra indrindra TOMPO amin ny fitiavanao ka nahazo izao tombonandro izao izahay.
Ilay tananao mahery no hitantana anay amin ny andronay sisa mba hanatanjaka any koa meteza TOMPO O hiaino anay Ianao.
Izay rehetra ataonay anie dia aoka ataonay amin ny anarao izany.
(nosoratan'i Mme Sisi tamin'i 25 Marsa 2013)
Andriamanitra Lehibe indrindra ô!
Misaotra anao aho noho ny fitahiana lehibe sy ny fasoavan-dehibe arotsakao ato @ tokantranoko.
Misaotra anao @ asa nomenao ny vadiko, ny zanako.
Misaotra ny @ fahasalamana omenao anay.
Misaotra @ zavatra rehetra.
Misaotra Tompo Ã´ @ fiarovanao anay.
Misaotra indrindra @ izay rehetra valimbavaka omenao anay @ zanakay.
Deraiko mandrakariva ny Anaranao Masina.
Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen!
(nosoratan'i Mi tamin'i 27 Marsa 2013)
Misaotra indrindra Jeso raha mbola afaka miresaka Aminao amin ny alalan ity Rindrimbavaka ity izahay.
Tompo o, mamela ny helokay Ianao ary mangataka izahay ny hanompo Anao amin ny andronay rehetra.
Mangataka aho Tompo amin izao fotoa izao ny mba hialan ny vahohon ity satana amin ny fiainanay tahaka izay itako androanay Tompo dia ireo olona izay voaroba ny entany raha mivarotra izy ireo.
Fantatrao ny momban ireny olona ireny izay mitady vola Jeso ka ilay tananao mahery no aoka hanampy azy ireo, eny fa na ireo olona izay nirahina hanao izany asa izany.
Mamela ny helokay ary aza avela izahay raha tsy miaraka aminao.
(nosoratan'i Mme Endrika tamin'i 11 Marsa 2013)
Misaotra Tompo fa mbol fahasoavanao sy famindram-ponao ny naazoanay mianakavy kely tombon'andro h@ anio;
Homban'ny fahasalamana sy ny fahatsaranao ny fiainanay.
Misaotra indrindra ary mankasitraka Anao.
Miankohoka eo antongotrao izahay, manaiky @ fonay sy ny sainay ary ny Fanahinay fa "TSY MISY AFA TSY HIANAO NO ANDRIAMANITRAY,MPANJAKANAY,MPANAVOTRA ANAY,ARY KOA MPANOME NY SOA REHETRA EO @ FIAINANY.
Mankalaza Ray Masina ô!
@ ANARAN'I JESO KRISTY ZANAKAO LAHY TOKANA MPAMONJY ANAY ary VELONA MANDRAKIZAY no hanaovako izao vavaka fisaorana izao.
(nosoratan'i Christiane tamin'i 19 Marsa 2013)
JESO KRISTY TOMPO O,
Misaotra sy manome voninahitra Anao izahay amin ny famindram ponao ka nahazo izao fotoana izao indray izahay.
Mametraka ny fiainanay am pelantananao mandrakariva ary dia mangataka aho TOMPO ny mba anampianao anay amin izay rehetra ataonao.
Mahafantatra ny zava drehetra Ianao ary mahafantatra ny mety atao sy tsy atao.
Mamela ny helokay raha toa ka mitompon teny fantatra izahay kanefa mbola mety tsy sitrakao akory.
Mifona TOMPO O. Ankehitriny dia mbola mangataka izahay ny hitoeran ny Fanahy Masinao aty aminay.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 11 Marsa 2013)
Famonjena Famonjena :
Misaotra Anao izahay amin ny fitiavanao ka mbola afaka miresaka Aminao amin ny alalan ity Rindrimbavaka ity.
Mamela ny helokay TOMPO satria ratsy eo imasonao mandrakariva izahay kanefa matoky ny fitiavanao ny hamonjenao anay amin ny alalan ilay tananao mahery.
Mamela TOMPO O, eny mamela any ary matoky fa hitodika aminay Ianao ka hanokatra ny tananao ho aminay.
Amin ny anaranao Mpamonjy no hanaovako izany vavaka izany.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 19 Marsa 2013)
Andriamanitra Rainay , mpamorona anay, mpiahy anay , ary mpamonjy anay ianao, voaharinao izahay ,fa indrindra zanako ity izay mivary lavo amin'ny fisotroan-toaka sy fitondran-tena tsy mendrika ;
Mamela ny helony ianao Ray o, esory ao anaty ireo voa ratsy ireo satria tsy sitrakao ny ipetrahan'ireo ao anatin'ny fony ,
Vonjeo izy Ray ô , inoako Ray ô tsy misy afaka hanaisotra azy afa tsy ny herinao irery ihany Jesosy ô , ampahirato ny masony mba hahita ny faharatsian'ny toerana misy azy ka mba hahatonga azy hiantoraka aminao tanteraka.
Amin'ny anaranao Jesosy ô no hametrahako izany vavaka izany.
(nosoratan'i Mme Annick louisette tamin'i 19 Marsa 2013)
TOMPO, mifona aminao izahay noho ny fahotanay maro, fa te hanatona ny tempolinay ka mba magataka ny fanahinao masina hitarika aminay amin izany.
Mifona Tompo am fitototonay am asa sy trosa sy teny ratsy sy toetra ratsy ka tsy afa o izahay am zay ataona amizany.
Mifona Tompo, mba raiso izany ba hanadiovano anay mba ho olombaovao.
(nosoratan'i aisha tamin'i 07 Marsa 2013)
TOMPO O, ny miresaka Aminao no tiako mba hanome ahy hery sy tanjaka entiko hanompoana Anao amin ny androko rehetra.
Misaotra indrindra TOMPO satria mahalala ny zavatra rehetra Ianao ka mahay manamboatra ny fiainanay.
Mangataka TOMPO ny hanomezanao fahalalana indrindra mba entiko hiatrika ny fiainako.
Dia misaotra indrindra TOMPO ary amin ny alalanao no hanaovako izany vavaka izany.
(nosoratan'i Mme SISI tamin'i 04 Marsa 2013)
Mariage Mariage :
Jesosy a! efa mandeha dia mandeha ihany ny fotoana nefa izahay tsy manambola entina hanaovana ny mariazy fa matoky fotsiny ny Teninao dia izany no inoanay sy ianteheranay,
Koa aza ela intsony Jesosy fa mba jereo araka ny indrafonao lehibe dia valio ny vavakay, mba vitaina alohan'ny ahaterahako Jesosy a,
Vonjeo re fa miandry Anao ny mpanomponao e, Ianao no herinay sy tokinay Misaotra Jesosy Amen
(nosoratan'i Samuelson tamin'i 28 Febroary 2013)
Fanantenana Fanantenana :
TOMPO O, Mifona Aminao izahay satria meloka eo anatrehanao.
Mamela ny helokay Ianao mba hanadio anay ary hitondra anay amin ny fiadanana mandrakariva.
Maro ny mpanenjika any amin ny izao fotoana izao kanefa matoky ny FANANTENANA avy Aminao izahay. Ianao no Ilay mahery indrindra afaka manafaka anay amin ny ratsy.
Manantena izahay TOMPO fa hamboarinao ny lalanao. Misaotra indrindra TOMPO.
Amin ny anaranao no hanaovanay izany vavaka izany.
(nosoratan'i Sylvie tamin'i 07 Marsa 2013)
Misaotra Tompo ra mbola afaka mamoaka ze ato ampoko eto aho anio fa fahasoavana sy famindram-po avy Aminao izany.
Misaotra Anao aho Jeso fa Hianao no lalana nafahako miantso Ilay Andriamanitra Ray sy ny Fanahy Masina.
Tompo malala a!mangateheta fo vaovao aho,maniry ny ho vavolombelonao tokoa,te hanao zay sitraponao,nanenenako ireo ratsy nataoko ka hanenjehan'ny olona ahy ankehitriny,te ho Anao feno aho Jeso a!te hanao ny sitraponao aho ary tiako ho hitan'izao tontolo izao fa ANAO aho ankehitriny.
Te ahita ny voninahitrao eo @ tokatranoko sy ny ankohonako aho.
Tiako fafanao @RANAO ny otako sy reo laingako bdb.menatra Anao aho Tompo a!amorony fo madio aho.fenoy ny Fanahy Masinao.Hainao atao ny zavatra rehetra.mino izany aho.valio zao vavako izao RAY ô
@ Anaran'i JESO KRISTY ZANAKAO LAHY TOKANA
(nosoratan'i radanielina tamin'i 07 Marsa 2013)
Arovinao Tompo ny ankohonako,mamelà ny helokay rehetra teo anatrehanao, omeonao ny Fanahinao Masina ny tsirairay aminay, fenoy ny fitiavanao ny fonay, mitoera mandrakariva ao anatinay hisolo vava sy ho mpanolo-tsaina anay, mamindra fo aminay, ary valio ny faniriana tsara rehetra ao anatinay.
Misaotra Anao Andriamanitra Ray sy zanaka ary Fanahy Masina ô!
Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy anay no angatahiko izany vavaka izany.
(nosoratan'i manaiky tamin'i 27 Febroary 2013)
Mba misy fampaherezana kely ho antsika ami'ity rindrimbavaka ity
Misy tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Baiboly hoe "raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angataho izay tinareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany Jaona15/7,
Aza reraka ny mivavaka fa Mpihaino vavaka Jesosy dia manana finoana Azy tanteraka DIA MAHEREZA DAHOLO
(nosoratan'i Samuelson tamin'i 26 Febroary 2013)
MISOTRO RONONO MISOTRO RONONO :
Tompo malala a! apetrako eo ampelatananao ny 18 volana sisa hiasako ato @ ty toeram-piasako ty ka andehanako "MISOTRO RONONO".
Misaotra noho zay taona maro niasako tato zay. Arovy aho Tompo ka rakofy @ RAN'I Jeso Kristy.
Matoky Anao aho RAY MASINA SY MPAMINDRAFO Ô ary ataoko zao vavaka izao @ Anaran'i Jeso Kristy Mpamonjy sy Mpanafaka ahy.
Misaotra Jesosy a! AMEN.
(nosoratan'i RHC tamin'i 25 Febroary 2013)
asa atao asa atao :
Jeso Kristy Zoky a! mangataka asa avy Aminao za sy F @ zao andehanako retraite zao.
Omeo saina matsilo sy tolory hevitra mahasoa entina manokatra toeram-piasana zahay.
Jeso a!asa avy Aminao no tiako ka mba omeo re fa hanao anie ny fahefana e. ary hainao atao ny zavatra rehetra.Matoky Anao ary miandry Anao.
(nosoratan'i RHC tamin'i 26 Febroary 2013)
Misaotra Tompo Misaotra Tompo :
Misaotra Anao @ foko,saiko,fanahiko manontolo aho Ray Masina ô ,misaotra ndrindra Jeso Kristy ô ,misaotra tanteraka Anao Fanahy Masina ô ! noho ny resaka nifanaovanay mvd t@zanakay mvd any Canada;
Fifaliana lehibe ho anay mantsy ny nandrenesanay fa mande araka ny sitraponao ny zanakay.
Tompo a! TAFIO ny Herinao izy 2 ary arovy @ fakam-panahy ka ny fikasany hanompo Anao @ alalan'ny fandraisana andraikitra any ampegonana
Dia mba ho tanteraka soamatsara ka tsy iverin-dalana mandrakizay fa ho fitaovana eo ampelatananao A sy M ampandroso hatrany ny fanjakanao
Ka HIANAO tokoa no itarika azy sy hanoro azy 2 @ zay alehany sy ataony ho voninahitrao irery iany;
Misaotra RAY ZANAKA FANAHY MASINA ô. AMEN
(nosoratan'i CHRISTIANE tamin'i 25 Febroary 2013)
Tompo ô! Misaotra Anao aho fa mbola ny Fahasoavanao no nahatoy izao ahy
Mangataka amin'ny anaranao Jesosy Kristy aho mba omenao vola hanaovanay ny mariagenay
Misaotra Jesosy Amen!
(nosoratan'i Samuelson tamin'i 25 Febroary 2013)
Andriamanitra Ray ô, misaotra fa noho ny FAHASOAVANAO sy ny FAMINDRAMPONAO dia afaka miditra @ty rindribavaka ity ndray aho.
Tompo ô,@ foko manotolo no iankohofako eto anatrehanao, mifona fa diso ary tsy mendrika teo anatrehanao, mamelà ny heloko fa nanota teo imasonao, menatra Anao ary soa fa teo ny Ran'i Jeso ZANAKAO Lahy tokana mba ho famonjena ahy.
Raisiko sy inoako ny nanolorany ny tenany ho famonjena anay, misaotra Jeso malala fa lehibe tsy takatry ny saiko ny fitiavanao ahy.
SAMBATRA NY OLONA IZAY VOAVELA NY HELONY SY VOASARONA NY FAHOTANY SAMBATRA NY OLONA IZAY TSY ISAINY JEHOVAH HELONA ARY TSY MISY FITAKA NY FNAHINY.
(nosoratan'i Christiane tamin'i 13 Febroary 2013)
Misaotra indrindra TOMPO raha mbola omenao izao fotoana izao ahafahanay mifampiresaka aminao amin ny alalan itony soratra itony koa.
Misaotra indrindra Anao izahay nohon ny indrafonao mandrakariva ary mahatoky izahay fa ny tananao mahery anie hitsotra aminay tsirairay avy mba hahazoanay ny famelan keloka sy ny fifonana avy Aminao.
Ny Fanahy Masinao hirotsaka aty anatinay ka hameno anay mba ahazoanay tanjaka entinay hanompo Anao.
Mifona amin ny fahotana vitanay isanandro Tompo o ary tena mifona tokoa.
Mangataka ny fahatokiana avy Aminao izahay mba ho mpandresy tahaka Anao.
Amin ny anarao JESO NO HANAOVANA IZANY VAVAKA IZANY.
(nosoratan'i Sylvie tamin'i 13 Febroary 2013)
Mangataka Aminao aho ry Jesosy sakaizan'ny tanora mba homenao ahy ny FANAHY MASINAO ka hananako fahendrena sy fahalalana manoloana ny asa izay atao.
Mangataka koa aho mba homenao vady hendry manana anao Jesosy ka mendrika sy sahaza ho ahy.
Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany.
(nosoratan'i Lucia tamin'i 20 Febroary 2013)
Finoana Finoana :
TOMPO O, Ianao mahay ny zavatra rehetra.
Misaotra indrindra amin ny fitiavanao anay mandrakariva ny amin ny fiainanay.
Na dia mandalo zava tsarotra aza izahay ankehitriny amin ny fiainanay andavanandro dia ny FANAHINAO MASINA no hitoetra aty anatinay ka hiasa aminay amin ny andronay rehetra.
JESOSY O, mamela ny helokay IANAO, jereo izahay fa miantso ANAO amin ny andronay rehetra. Jereo ny olona rehetra izay mitady Anao ary hangatahiko manokana eto ny vadiko izay ao anatin ny tsy fahasalamana, ny TANANAO MAHERY ANIE HIKASIKA NY FARITRA MARARY KA HANASITRANA AZY AMIN NY ARETINY.
Misaotra indrindra TOMPO O fa mpihaino vavaka tokoa IANAO.
Amin ny anaranao no hanaovako izany vavaka izany,
(nosoratan'i Mme Harisoa tamin'i 14 Febroary 2013)
JESO KRISTY tsara indrindra o, misaotra Anao mandrakariva izahay raha mbola nintantananao ny fiainanay ka mbola afaka mifampiresaka Aminao amin ny alalan ity rindrim bavaka ity.
Mifona aho TOMPO amin ny fahotana vitako eo imasonao ary tena mangataka ny hodiovinao amin ilay Ranao soa izay nalatsakao.
Matoky anefa aho TOMPO fa tsy avelanao irery izahay fa ilay Tananao mahery no hisakambina anay amin ny andronay rehetra.
Misaotra indrindra TOMPO ary amin ny anaranao no hanaovanay izany vavaka izany.
(nosoratan'i Sissi tamin'i 11 Febroary 2013)
JESO KRISTY Lohan izao tontolo izao, misaotra anao mandrakariva izahay raha mbola afaka miresaka aminao satria Ianao no mahay mandahatra ny zavatra rehetra.
Misaotra indrindra TOMPO fa mbola misy ny toy izao hahafahanay miresaka sy maneho ny voninahitrao Aminao.
TOMPO O, mifona indrindra amin ny fahotanay izahay ary tena mandohalika eo am potontrin ny Hazo nijalianao, mangataka famelana Aminao.
Hainao anefa ny zavatra rehetra ary hoy Ianao hoe izay rehetra mino no hovonjena, hitanao avokoa ny hetahetan ireto mpanomponao izay mangataka Aminao eto TOMPO, fantatrao ny atao azy ireo JESO.
Misaotra indrindra. Ny amiko TOMPO, mametraka ny fiainanay am pelatananao mandrakariva izahay ary mino sy mahatoky fa tsy hamelanay ho KAMBOTY tokoa IANAO JESO amin ny ady atrehinay isan andro.
Amin ny anarao JESO no hanaovako izany vavaka izany. Amena
(nosoratan'i Harisoa tamin'i 09 Febroary 2013)
Andriamanitra ô, mangataka aminao aho ny @ fiainam-pitiavako, omeo olona hendry sy matahotra Anao aho.
Ampianaro ny foko hahay miaky ny sitram-po nao ary tandremon ny lalako tsy ho any @ fankam-panahy.
Hatanjaho ny finoako anao mba hiorenako tsara @ didinao.
Esory amiko izay rehetra mampisaraka ahy aminao Tompo ô! Ampahafantaro ahy Jesosy raha ho anjarako izay na tsia fa mijaly loatra aho izao ny mizaka ny ditrany ary mba tsidiho koa ny fony Tompo ô.
Misaotra indridra @ famindram-ponao hatr@'izay ary de ampio aho fa mila anao ny foko.
(nosoratan'i Marie Ange tamin'i 08 Febroary 2013)
Misaotra Tompo Malala ô! fa fitiavana tokoa Ianao.
Misaotra ny @ fitahianao rehetra, Misaotra ny @ fitiavanao tsy manampetra, satria tsapa ary hivelomanay isanandro izany.
Misaotra ny @ taridalana avy @ fiombonambavaka ka handraisana ny Teninao, izay fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay tokoa.
Misaotra Ray ô! eny Misaotra indrindra fa marina aminay ny Teninao manao hoe "Indro Aho momba anareo mandrakariva ..." Misaotra Andriamanitra, Misaotra Fanahy Masina, Misaotra Jesosy ô! Aleloia ! Amena !.
(nosoratan'i Noro tamin'i 07 Febroary 2013)
Misaotra Anao indray Ray ô! mbola nomenao tombonandrom-pahavelomana nahatratra izao anio izao.
Misaotra satria afaka nandray indray ny hafatra avy taminao, izay hery lehibe ho ahy tokoa satria nampahafantarinao ahy androany ny @fomba fivavaka.
Mila mivavaka miaraka @ fandinihantena tokoa ry Tompo, fa tsy misisika lava @fangatahana , mila misaotra mandrakariva koa.
Misaotra Tompo fa atao ahoana tokoa moa no ahalala raha tsy misy mampianatra.
Misaotra Andriamanitra ô! @ anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovaka izany vavaka izany Amen !
(nosoratan'i NORO tamin'i 06 Febroary 2013)
Mankasitraka Tompo fa valim-bavaka ny ahafahan'i Andry(Boy)miatrika ny formation amin'ny asa.
Mino izahay fa ho asa raikitra io. Dia miandry koa ny asa sahaza izay omenao an'i Dera izahay.
Amin'ny anaranao ry Jesoa tsy mba manadino anay no anadratanay izany.
(nosoratan'i Dina tamin'i 01 Febroary 2013)
Misaotra anao zay Ray ô ! mbola nomenao tombonandro tojo izao rindrimbavaka izao, vao2 isanandro tokoa ny famindraponao sy ny fahasoavanao ho anay.
Misaotra indrindra Andriamanitra ô! Mamindrà fo aminay anefa noho ny fandikanay ny didinao masina.
Ankehitriny Ray ô! mivavaka aho ho an'ireo rehetra izay ato @izao rindrimbavaka izao : ao ireo zay matsiaro ny fitahinao, ao ireo manana olana maro samihafa, ireo ao anatin'ny aretina. Ireny retra ireny Tompo ô dia mby efa eo anatreanao, koa omeo anay ny fo matoky Anao, ny finoana, fa Andriamanitra mahefa ny zavatra retra Ianao.
Ny voninahitra dia ho Anao irery ihany. @ anaran'i Jesoa Kristy Tomponay no anaovako izao vavaka izao. Misaotra Ray ô!
(nosoratan'i Noro tamin'i 01 Febroary 2013)
Jesosy ô, mifona Aminao aho fa sady tsy nakato ny Tenina sy ny bitsiky ny Fanahinao.
Mifona aho Jesosy fa tsy nangataka akory ny herinao mba hanoherako ny faka-panahy rehetra.
Mifona fa nanakalo Anao t@javatra hafa raha niantso ahy Hianao.
Mamelà ny heloko ry Mpamindra fo sy Mpiantra ô! aza avela irery aho ary aza tsaroanao ny fahadisoaka fa fafao @ny ranao Jesosy ô!
Hianao mahalala ahy, omeo hery aho tsy hivadika Aminao.
Omeo ilay Fanahy mahery sy fitiavana aho andreseko ny sain-dalin'i satana.
A@ anaranao Jesosy Kristy no angatahako izany, amena!
(nosoratan'i DDS tamin'i 04 Febroary 2013)
Andriamanitra ô! misaotra Anao mandrakariva aho noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao mbola afahako mivavaka Aminao indray ankehitriny.
Mamindra fo amiko Ray o ny @izay tsy fahamendrehako eo anatrehanao, fa mifona Aminao aho.
Mangataka Aminao aho @anaran'i Jesoa Kristy mba ahazoan'ny zanako asa.
Raha mety Ianao Tompo, mahay manome izany asa izany ho azy.
Misaotra Anao sahady aho Andriamanitra ô! satria Ianao milaza fa na inona na inona angatahanay @anaranao, ka mitoetra ao anatinay ny Teninao, dia ho azonay izany.
Ny voninahitra dia ho Anao irery ihany Andriamanitra o, ary @anaran'i Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy anay no hanaovaka izany vavaka izany.
(nosoratan'i Noro tamin'i 04 Febroary 2013)
Tompo Andriamanitray ô.
Misaotra noho ny tombon'andro nomenao fa tena fahasoavana sy famindram-po tokoa no manaraka anay iany koa avy aminao ry TOMPO TSITOHA @ANARAN'I KRISTY JESO ; AMEN
Mangataka asa sahaza avy AMINAO ANDRIAMANITRA ô ho an'i A.sy M.any Canada, mino sy matoky fa efa eo ampelatananao izany faniriana izany ary efa manana valim-bavaka mifandrify @zany Hianao fa Andriamanitra Hianao ary manana ny fotoana mety anomezanao izany.
Matoky Anao zahay ry Tompo. Mamindrà fo aminay ry Tompo ary mamelà ny helokay fa diso teo anatrehanao izahay.
Miaiky Tompo ô fa tsy mendrika teo anatrehanao.@ ANARAN'I JESO KRISTY TOMPONAY;
(nosoratan'i christiane tamin'i 04 Febroary 2013)
TOMPO ô, tsara indrindra Hianao,deraina ny asanao,ankalazaina ny Anaranao, masina sy marina Hianao.
AtolotrO anao ny amiko rehetra ka raiso re ra sitrakao fa efa nanaiky sy nandray an'i JESO KRITY aho ho Tompoko sy Andriamanitro ka ny RANY no efa nanadio ahy t@ heloko sy ny fahotako ary ny tsy fahamendrehako rehetra.
Atolotro Anao ny zanako lahy sy ny asany mba hanehoanao ny voninahitrao, atolotro Anao ny ankohonana kelin'i A.sy M.mba anjakanao, atolotro anao ny vadiko mba hanao ny asanao, atolotro Anao ny tenako mba ho fiderana Anao sy ho irakirakao.
Zao vavaka izao d atao @Anaran'iJESO KRISTY ZOKINAY.
(nosoratan'i Christiane tamin'i 24 Janoary 2013)
Ray Malala ô ! misaotra Anao aho noho ny fitiavanao ahy, misaotra Anao raha tojo izao rindrim-bavaka izao, fa manaporofo izao Andriamanitra fa mamaly ny hetahetako Ianao, dia ny mba ahazoako miresaka Aminao amin'ny alalan'ny vavaka, miombom-bavaka amin'ireo mpandray anjara rehetra eto.
Maro Tompo ô ! ny fangatahako Taminao, nefa hatrami'izao dia mbola feno alahelo sy adin-tsaina aho satria toa mbola tsy nahazo izay niriko.
Mifona Ray ô! noho ny fahotako.
Nihevitra aho mantsy fa satria zanakao, mpanomponao ka dia midongy fotsiny izao, toa mandidy Anao Andriamanitra rehefa mangataka. Manomboka izao Ray ô ! hianatra aho ka raha mangataka Aminao aho dia hanao toy ilay boka maniry hositranina ka hanao hoe : "Raha mety Ianao Tompo dia mahay..." Mark1/40-45 Misaotra Ray ô ! Amin'ny an aran'i Jesoa Kristy Tompo,
(nosoratan'i Noro tamin'i 31 Janoary 2013)
Tompo Andriamanitra Tsitoha Masina sy Marina Ô!
Mangataka @ANARAN'I JESO KRISTY ny tenako R.H.Christiane mba omenao fahendrena @ fitondratena araka ny sitraponao,mangataka fahaizana mitantana iany koa reo harena sy fahasoavana ary ny fitahiana narotsakao, ary tsy izaho irery fa ny ankohonako koa.
Fenoy ny FANAHINAO MASINA mandrakariva izahay isam-batan'olona mba ho fanilo mitantana sy manoro anay zay tokony ataonay, fa malemy zahay ra tsy hombany HERINAO TOMPO Ô.
Mivavaka hoan'reo manana olana(MISO) sy ao anaty ady saotra(FABRESOA) aho mba ho jerenao @masonao feno famindrampo ka hahita ny famonjenao, handray fitahiana avy Aminao ka ho mpanompo mahatoky ho lasa fitaovana eo ampelatananao.@ANARAN'JESO KRISTY TOMPO
Fiarovana Fiarovana :
TOMPO O, mangataka ny fiarovanao mahery aho amin ny fiainako rehetra satria miha mahery ny ratsy mitady hamotraka ahy.
Mifona amin ny fahotako Andriamanitra o satria manao ny tsy mety eo imasonao kanefa ilay tananao be famindram po no hangatahiko hanampy ahy amin izay rehetra ataoko.
Ny FANAHY MASINAO hirotsaka aty anatinay ka hanova anay ho vaovao.
(nosoratan'i Sylvie tamin'i 25 Janoary 2013)
Ry Jehovah Andriamanitray ô ! Ianao efa tia anay ka naneho izany tamin'ny nahafoizanao an'i Jesosy Kristy Zanakao.
Misaotra Anao aho, indrindra nomenao izao fifandraisana ami'ny mpino izao ka ahazoanay mifampivavaka. Ampitomboy ary ny finoanay Anao Tompo ô ! ary ampaherezo mandrakariva koa izahay manoloana ny ady rehetra zay tsy maintsy hatrehanay ety amin'izao tany fandalovana izao.
Tahio izao fitaovana izao mba ahazoanay mihaona am-pinoana amin'ny fiombonam-bavaka amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay.
Misaotra Ray ô ! amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no hanaovanay izany vavaka izany.
Tonga eto @ty rindrim-bavaka ity ndray ny mpanomponao,hanolotra fisaorana Anao @Anaran'i Jeso Kristy Tompo.
Misaotra manokana fa noho ny Fahasoavanao sy ny Famindram-ponao dia:vita soamatsara ny fanamasinana ny fanambadian'i A sy M. Tonga soa any Canada iany koa izy 2 refa novimbininao, nomenao asa tsara iany koa ny zanako lahy ka nahavita soamatsara ny stage 3mois ; misaotra koa fa notahianao t@ asany ny vadiko ka miroborobo fatratra ary ambonin'izany retra zany dia notafianao fasalamana izahay mianakavy.
Kanefa tsy reo fotsiny ny fahasoavana narotsakao t@nay ry TOMPO, fa maro b tsy ho voatanisa eto.hitanao Ray ô ny ato ampoko fa feno fankasitrahana ANAO.
MISAOTRA MANKASITRA MANKATELINA ANAO izahay ry RAY ZANAKA FANAHY MASINA.
Tompo Andriamanitray ô, miantso Anao aho @zao ora zao ary @ ANARAN'I JESO KRISTY NO IANTSOAKO ANAO.
Mpanota tsy mendrika aho,mifona ary miaiky ny tsy fahamendrehako aho.
Tompo ô, mino aho fa voavela ny heloko noho ny @RAN'I JESO KRISTY ZANAKAO LAHY TOKANA.
Nandray AZY ho Mpamonjy ahy aho,mino ny asam-pamonjena natolony, ka havaoziko ndray eto ny fanekeko AZY ho Mpanjaka ny amiko rehetra ary tsy izaho irery fa ny ankohonako rehetra koa(F,A+M,H) ;misolo tena azy ireo aho satria fantatro fa efa nadray an'iJESO koa zareo.
MISAOTRA RAY,ZANAKA,FANAHY MASINA.AMEN
(nosoratan'i Christiane tamin'i 22 Janoary 2013)
Taona VaovaoTaona Vaovao:
Jesosy Tompo ô, Misaotra anao aho noho izao Taona vaovao izao.
Maniry ny Fitahianao, ny Famindramponao, ary indrindra ny Fahasoavana avy Aminao.
Misaotra Jesosy ô
(nosoratan'i R tamin'i 02 Janoary 2013)
Andriamanitra ô, tahio ny tanindrazanay fa tena mahantra.
Enga anie ka ny mpitondra sy izahay vahoaka hibebaka amin'izay tsy mety nataonay ary handray an'i Jesosy ho Mpamonjy sy Tomponay amin'ny fonay rehetra ary hanaraka izay lazain'ny Fanahy Masina anay.
Misaotra fa Hianao dia manome mihaotra nohon'izay heverinay.
(nosoratan'i JR tamin'i 21 Janoary 2013)
Misaotra Anao izahay fa nomenao famindrampo ka nahazo izao taona vaovao izao.
Ny FANAHY MASINAO anie ry TOMPO no hitantana ny fiainanay Malagasy ka hahatsiaro mandrakariva izahay fa miaraka Aminao.
Mifona tamin ireo ratsy rehetra vitanay teo imasonao nandritra iny taona lasa iny ary hiezaka izahay TOMPO ny HANAVAO indray ny finoanay, ny fahatsapanay fa Ianao mitantana ny fiainanay mandrakariva.
Mamela ny helokay TOMPO ary aza tsaroana ny hadisoanay.
Hapetraka am pelantananao ny andronay rehetra mba tena Ianao no hameno ny fiainanay ary hiaro anay amin ny herin ny ratsy.
Amin ny Anaranao JESO KRISTY no hanaovako izao vavaka izao.
(nosoratan'i Sylvie tamin'i 04 Janoary 2013)
Tompo o, mbola inty aho, mbola tsy nivaha ny olako, mila anao aho Raiko o, tantano aho fa mitady ho very,
Jesosy o, omeo ahy ny anjarampitiavako araka ny sitraponao,irery aho Jesosy o,
Tena irery, mila Anao hamonjy ahy, henoy ny vavako Tompo o ,tahio ny zanako.
(nosoratan'i Miso tamin'i 21 Desambra 2012)
Tompo ô, Mamindra fo amiko.
Apetrako eo am-pelatananao tanteraka ny ny fiainako ,ny zanako ,ny ankohonako!
Raha misy dera dia anao irery izany.
Misaotra Jesosy ô fa mbola afaka miantso ny anranao aho
(nosoratan'i Fanantitra tamin'i 16 Desambra 2012)
Dada o !Dada o !:
Dada ô ! sambatra aho manana Anao,
Dada ô ! faly aho afaka mametraka ity soratra ity eto ho Anao, mba faniriako raha sitrakao, izay rehetra mahita ity soratro eto dia ho faly tahaka ahy koa,
Ahatsiaro sambatra toa ahy, fa tsy IRERY manana ANAO, tsy maintsy MAHERY miaraka Aminao, ary tsy ho very eo anilanao.
Misaotra Dada ô !
(nosoratan'i Nadia Andriampenomanana tamin'i 05 Desambra 2012)
Mitalaho aminao aho Ray be fitia ny anoloranao asa mendrika sy sahaza ho ahy sy ny vadiko
(nosoratan'i Manjaka tamin'i 18 Desambra 2012)
tres grand mtres grand m:
Tompo Soa sy Avo! nomenao fifaliana lehibe ireto ondry.. kely sy sahirana .. nomenao ny tsara indrindra ..kiaka sy tomany lava nefa nampaerezinao @fotoana mazava be !! misatra sy dera TOMPO
(nosoratan'i marguerite marie tamin'i 13 Desambra 2012)
Jeso ô! misaotra sahady ny amin'ny asa izay efa omenao an'i Dera sy Andry(Boy).
Tamim-pinoana sy fahasahiana no nangatahinay ary amim-panantenana kosa no iandrasanay ny valim-bavaka.
Derainay mandrakizay ny Anaranao.
(nosoratan'i DINA tamin'i 3 Desambra 2012)
ANDRIAMANITRA ô, fenoy ny Fanahinao Masina ny isam-piankohonana malagasy ka hitombo tsara amin'ny fahalalana Anao Jesoa Kristy ny tsirairay, amin'ny alalanao Jesoa malala ô, no anandratako zany vavaka izany.
(nosoratan'i sidonie-madagascar tamin'i 04 Desambra 2012)
Tompo ô! afaho amin'ny trosa aho amin'ity 2012 ity.
De ho taom-panambinana anie ny taona vaovao 2013.
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 03 Desambra 2012)
ANDRIAMANITRA O, misaotra Anao izahay raha mbola nitantananao ka nahatratra izao andro izao indray.
Misaotra indrindra TOMPO satria lehibe ny indrafronao aminay ary matoky izahay fa hamela ny fahadisoanay Ianao.
Mamela TOMPO O ary tena miantoraka mandohalika eo anatrehanao amin ny ota izay ataonay isan andro.
Mifona TOMPO O, tena mifona aminao izahay ary mangataka ny herinao Tsitoha dia ny Fanahinao Masina hitoetra aty anatinay satria izany no mahatonga ny fiainanay toy izao TOMPO dia ny tsy fanarahana ny Didinao.
Misaotra indrindra Anao izahay JESO MPAMONJY.
(nosoratan'i Mme Sissi tamin'i 21 Novambra 2012)
Jesosy ô amn'ny anaranao lehibe sy mahavonjy no angatahako izao vavaka izao, mino aho miaino ary mijery Ianao, efa itanao tsy afenina aminao Jesosy ny olako.
Ka raha andeha indrana vola rahapitso ny vadiko Ianao anie Tompo itsilo ny lalany ary mba hahamora ny fon'ireo olona zay indramana vola.
Mahatoky anao aho Jesosy ô. Miangavy aho, mitalaho mba jereo izy ireo, jereo ny fiainana telo mianaka kely.
Misaotra sahady aho Tompo satria fantatro fa tsy anary anay Ianao
(nosoratan'i Frabesoa tamin'i 21 Novambra 2012)
Tompo ô, tsy mendrika ny iantso ny anaranao akory aho satria mpanota, nefa Tompo aiza intsony moa zany no alehako ?
Ianao sisa no antenaiko amin'ity fiainana ity.
Mila vonjy aho Tompo ary tena tsy miafina aminao ny mahazo ahy amin'izao fotoana izao.
Tsy an-trano tsy an-dalana, tsy aty ampiasana fa miasa saina lava amin'ireo tahotra sy enatra, ny trosa be-ako miavosa, reo olona mitady andetika ahy, toroy vaha-olana aho Tompo ô, tena mila tsy ho zakako intsony zao manjo ahy izao.
Tsy namana, tsy havana, tsy piray tanana tsy misy mba anoro hevitra na hiaro na hanampy fa toa vao maika ary manakora sy maneso.
Aiza no alehako ? Tompo ô omeo vaha-olana aho, mafy loatra izao manjo ahy izao!
Misaotra Anao zahay 5mianaka ry Tompo malala fa narotsakao taminay ny famindram-ponao ka nandraisanay ny fitahiana maro b avy Aminao.
Misaotra Jeso fa Hianao no lalana nandraisanay zao fahasoavana b d b izao.
Misaotra fa mbola notarihiny FANAHY MASINA aho hametraka zao vavaka zao eto.
Misaotra Tompo fa naazo asa Hery.
Misaotra fa asa tena tsara no nomenao azy, midira ao ampony HIANAO TOMPO ô ka raiso ny toerana mahampanjaka Anao.
Hidera Anao @ talenta nomenao azy izy anie ho voninahitrao irery iany.
Misaotra koa noho ny taratasin'i A.sy M.ary misaotra noho ny fanamasinana ny fanambadiany atao ao @ tempolinao.
Misaotra noho ny fasalamana nomenao anay mivady.
Misaotra tanteraka, ary miankohoka AMINAO aho misolo tena anay 5mianaka.
Raiso ny dera, ny haja ary ny voninahitra HO ANAO IRERY @ ANARAN'i JESO KRISTY ZOKINAY! .
(nosoratan'i christiane tamin'i 20 Novambra 2012)
Asa VaovaoAsa Vaovao :
HOY IANAO NY MATAVY INDRINDRA NO ATAOKO EO AMIN'NY LATABATRAO;ARY IZAY MANGATAKA DIA OMENA
MBA TOVY AMIKO IZANY JESOSY O! HO FANTATRY NY OLONA FA ANAO NY HERY SY VONINAHITRA SY NY FANAPAHANA REHETRA ETY ANTANY SY ANY ANDANITRA ARY ANAO RAY SY ZANAKA SY FANAHY MASINA NY FAHEFANA REHETRA AMIN'NY ANARAN'I JESOSY ZANAK'ANDRIAMANITRA VELONA
(nosoratan'i Ony tamin'i 15 Novambra 2012)
ANDRIAMANITRA RAINAY O, misaotra Anao izahay raha mbola tantaninao mandrakariva ny fiainanay ka nahatratra izao maraina vaovao izao indray izahay.
Ny fitiavanao izay mameno anay amin ny andronay rehetra no hangatahinay ary indrindra TOMPO dia ny FAHENDRENA amin izay rehetra ataonay.
Mamela ny helokay TOMPO ary mifona amin izay rehetra fantatrao fa tsy mifanaraka amin ny sitraponao izahay.
Mifona ANDRIAMANITRA O, mamela ny helokay. Aoka izahay rehetra ataonay dia Ianao no hialoha lalana mandrakariva na hanoro izahay rehetra tokony ho anay tsirairay avy.
Ny andronay rehetra dia efa natokanay ho ANAO TOMPO.
Dia amin ny Anaranao mahavonjy no hanaovako izany vavaka izany. Misaotra TOMPO O.
(nosoratan'i Mme Sissi tamin'i 16 Novambra 2012)
Vavaka AnioVavaka Anio:
Misaotra Tompo fa mpihaino vavaka tokoa Ianao.
Voninahitra anie ho Anao irery !
(nosoratan'i miarizo tamin'i 14 Novambra 2012)
Tompo oh !
Ianao mahalala ny olana diavinay @ izao fotoana izao, Ianao anie Tompo no hamaha izany araky ny halebehin'ny famindram-ponao.
Misaotra Tompo nohon'ny Fitahinao anay isan'andro. Mihainoa Tompo ny vavakay.Matoky Anao hatrany izahay Tompo be Fitiavana.
Misaotra indrindra Tompo noho ny soa tsy tapaka arotsakao aminay.
Mamindrà Tompo fo aminay ary mamelà ny helokay, fa mpanota tsy mendrika izahay.
Apetrakay manontolo eo ampelantananao Tompo ny fiainanay manontolo, Ianao anie Hitahy anay @ izay ataonay rehetra, ka tsy atahotra na ho be haihay izahay satria Ianao no momba anay.
Ianao anie hamaha ny olana mandalo eo @ fiainanay ankehitriny izay tsy misy miafina Aminao.
Matoky Anao izahay Tompo fa mahefa sy mahay ny zavatra rehetra Ianao.
Misaotra Tompo noho ny fitiavanao anay.
Ho Anao irery anie ny voninahitra.
Tanjona Kely Tanjona Kely
Jesosy Malala o! Apetrakay eo ampelatananao tanteraka ny fahasalaman'i Tanjona kely
Miasa ry Tompo mahery oh! Sitrano tanteraka izy.
Omeo hery sy fahatokiana Anao ireo Ray amandreniny ary indrindra i Dada sy Mama.
Anao ny hery, laza ary voninahitra ry Jesosy Tompo lehibe ô!
(osoratan'i R&N tamin'i 10 Novambra 2012)
Tompo o! mangataka aminao aho mba sitrano re i Fidy dia amindrao fo ka ataovy mahita fitia eo imasonao dia mba hahita asa sahaza ho azy koa.
Hamarino aminy ny Teninao Tompo o! fa zanakao izy ka ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia adidinao ihany. Dia ampioreno isan'andro koa ny finoako hahatoky Anao hatrany. Amin'ny anaranao Jesoa Kristy.
(nosoratan'i RADOKO tamin'i 13 Novambra 2012)
Jeso ô!amin'ny fanantenana sy fahasahiana indray no anaterako ny vavako,amin'ny anomezanao an'i Dera sy Andry(Boy)asa sahaza,fixe sy stable, ahafahany mivelatra amin'ny fanompoana Anao.
Fantatro Tompo fa tsy manary anay izany Ianao.
Amin'ny Anaranao Jeso tompon'ny asa sy mpanome asa no andratako izany.
(nosoratan'i Dina tamin'i 14 Novambra 2012)